အလှနျကွီးမားတဲ့ငါးကွီးတဈကောငျကို သွစတွေးလတြှငျတှရှေိ့။ – SoShwe
admin March 22, 2019	Animals Leaveacomment
လူတဈယောကျခန်ဓာကိုယျထကျ ပိုမိုကွီးမားသညျ့ ဧရာမဂယျြလီငါးကွီး။
အလှနျကွီးမားတဲ့ ငါးကွီးတဈကောငျမှ သွစတွးလတြောငျဖကျရှိ ကမျးခွပေျေါသို့ ခဏတာ သောငျတငျလာခဲ့ပါတယျ။
Sunfish လို့ တံငါသညျမြားက သတျမှတျကွတဲ့ ၁.၈ မီတာ (၆ ပေ) အရှညျရှိတဲ့ ငါးကွီးတဈကောငျဟာ ပထမဦးဆုံးအကွိမျအဖွဈ ကမျးခွပေျေါသို့ သောငျတငျလာခဲ့ခွငျးဖွဈပါတယျ။ ပထမဆုံးအကွိမျ တှရှေိ့တုနျးကတော့ တံငါသညျမြားက ကမျးပျေါသို့မြောလာသော သဈတုံးကွီးလို့ ထငျခဲ့ကွပွီး အနီးကပျသှားရောကျကွညျ့ရှုတဲ့အခါမှသာ ငါးတဈကောငျဖွဈမှနျး သိရှိခဲ့ကွခွငျးဖွဈပါတယျ။
Our Park of the Month at Coorong National Park served up an unusual surprise for two fishers on the weekend –asunfish…
Posted by National Parks and Wildlife Service South Australia on Tuesday, 19 March 2019
“ ကြှနျမအနနေဲ့ ဒီလိုငါးမြိုးကို ပထမဦးဆုံးအကွိမျ တှရှေိ့ခဲ့ခွငျးပဲဖွဈပါတယျ . . .” ဆိုပွီး အပြျောတမျး ငါးဖမျးသူတဈဦးဖွဈတဲ့ Linette Grzelak မှ BBC သို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။ “ ကြှနျမရဲ့ မိတျဆှဖွေဈသူ Steven Jones မှာလညျး နှဈပေါငျးမြားစှာ ငါးဖမျးလာသူတဈယောကျဖွဈသျောလညျး ဒီလိုငါးမြိုး တဈခါမှ တှဖေူ့းခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျမတို့နှဈယောကျ ဒီငါးကွီးနဲ့အတူ ဓာတျပုံရိုကျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီး ဒီငါးကွီးမှာ အလှနျတရာမှ လေးလံပွီး အရပွေားကလညျး ကွံ့တဈကောငျကဲ့သို့ပငျ ကွမျးကွမျးတမျးတမျးဖွဈနပေါတယျ . . . ” ဆိုပွီး သူမမှ ဆကျလကျပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
အလွန်ကြီးမားတဲ့ ငါးကြီးတစ်ကောင်မှ သြစတြးလျတောင်ဖက်ရှိ ကမ်းခြေပေါ်သို့ ခဏတာ သောင်တင်လာခဲ့ပါတယ်။
Sunfish လို့ တံငါသည်များက သတ်မှတ်ကြတဲ့ ၁.၈ မီတာ (၆ ပေ) အရှည်ရှိတဲ့ ငါးကြီးတစ်ကောင်ဟာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကမ်းခြေပေါ်သို့ သောင်တင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရှိတုန်းကတော့ တံငါသည်များက ကမ်းပေါ်သို့မျောလာသော သစ်တုံးကြီးလို့ ထင်ခဲ့ကြပြီး အနီးကပ်သွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှသာ ငါးတစ်ကောင်ဖြစ်မှန်း သိရှိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
“ ကျွန်မအနေနဲ့ ဒီလိုငါးမျိုးကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် . . .” ဆိုပြီး အပျော်တမ်း ငါးဖမ်းသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Linette Grzelak မှ BBC သို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “ ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်သူ Steven Jones မှာလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ငါးဖမ်းလာသူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း ဒီလိုငါးမျိုး တစ်ခါမှ တွေ့ဖူးခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ဒီငါးကြီးနဲ့အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီငါးကြီးမှာ အလွန်တရာမှ လေးလံပြီး အရေပြားကလည်း ကြံ့တစ်ကောင်ကဲ့သို့ပင် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်နေပါတယ် . . . ” ဆိုပြီး သူမမှ ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Previous ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ လင်းပိုင်များ ရာနဲ့ချီသေဆုံးမှုဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်း။
Next ???????? ????????????? ????????????????? ???????????????????? ???????
ရဲတပျဖှဲ့ဝငျ မွငျးတဈကောငျရဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျးအမူအကငျြ့။
မာဆေးဆိုကျဒျရဲတပျဖှဲ့၌ နှဈပေါငျး (၁၅) နှဈကွာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သညျ့ မွငျးတဈကောငျသညျ နံနကျမိုးလငျးပါက လကျဖကျရညျတဈခှကျကို ပုံမှနျသောကျသုံးလရှေိ့ကွောငျး သိရှိရပါတယျ။ Jack ဟု အမညျရသညျ့ အသကျ (၂၀) …